ဂလစ်ဆရင်း (အင်္ဂလိပ်: Glycerol) / သည် အရောင်ကင်း၍ အနံ့ မထင်ရှားသော အချိုရည်ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖြစ်သည်။ ရေထက် လေး၍ ရေတွင် ကောင်းစွာပျော်သည်။ အဆီနှင့် ဆီစစ်စစ်မှန်သမျှတွင် ဂလစ်ဆရင်းပါသည်။ ဂလစ်ဆရင်းကို အလှဆီဟူ၍လည်း သိကြသည်။ သကြားမှ ကစော်ဖောက်ယူရသော အရက်များတွင် ဂလစ်ဆရင်း အနည်းအကျဉ်းပါ၏။ ဂလစ်ဆရင်းကို ဆပ်ပြာလုပ်ငန်း၌ ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြင့် အများအပြားရရှိသည်။ ဂလစ်ဆရင်းစစ်စစ်ကို ဂလစ်ဆရိုဟု ခေါ်ကြသည်။ ဓာတုဗေဒ အလိုအားဖြင့် ထရိုင်ဟိုက်ဒရစ်အယ်လကိုဟောဟု ခေါ်၍ ဓာတုသင်္ကေတမှာ ဟဂ္ဂ၃ ံ၅ (ဥံ)၃ ဒ္ဒ ဖြစ်၏။ အယ်လကိုဟောအစုတွင် ပါဝင်သော်လည်း ဂလစ်ဆရင်း၌ မူးယစ်စေတတ်သော သတ္တိအနည်းငယ်မျှ မရှိချေ။
↑ "Viscosity of Glycerol and Its Aqueous Solutions" (1951). Industrial & Engineering Chemistry 43 (9): 2117–2120. 10.1021/ie50501a040.
↑ (1994) in Lide, D. R.: CRC Handbook of Data on Organic Compounds, 3rd, Boca Raton, FL: CRC Press, 4386။
ဤ ဓာတုဗေဒနှင့်ဆက်နွယ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။